Carwadda 127-aad ee Kanton waxaa lagu qabanayaa khadka tooska ah laga bilaabo Juun 15 ilaa 24, waxaan ka soo qayb galnay carwada carton oo leh 3-4 waab tan iyo sanadkii 2012, waxaan u diyaarinaynaa shaqooyinka soo socda si aan u daboosho yaraanta carwada online-ka ah. 1. Sawirro dhar ah oo moodal ah: Kooxdayada xirfadleyda ah ee R&D waxay tijaabooyinka cusub ka qaadayaan in ka badan 1000 ...Akhri wax dheeraad ah »
Carwadda 127-aad ee Kanton waxaa lagu qaban doonaa khadka tooska ah laga bilaabo Juun 15 illaa 24. Carwadan online-ka ah waxay noqon doontaa naqshad dhismeed cusub iyo dib-u-habayn geeddi-socod ah. Waxay soo bandhigi doontaa seddex qaybood oo is-dhexgal ah: Madal Furan, Meel-ganacsiyeedka E-commerce iyo Adeegga Suuqgeynta Tooska ah, oo isku-dhafan doona j ...Akhri wax dheeraad ah »
Nalalka magaalada waxay ku darsadaan mowduuca caadiga ah ee skateboardka waxyaabaha ku jira xilliga iftiinka habeenkii. Dareenka dhaqdhaqaaqa, faahfaahinta ficil ahaaneed ee wax ku oolka ah iyo faahfaahin qaabeysan ayaa hal-abuureysa walxaha skateboard-ka muhiimka ah. Waxay u dhigmi kartaa midabada dhalaalaya ee cagaarka nuuradda bayoolajiga ah, midab elektroiki-optic iyo intellige ...Akhri wax dheeraad ah »
Iswaafajinta moodada iyo waxqabadka
Dadka casriga ahi waxay filayaan inay ku noqdaan noloshoodii asalka ahayd kacdoon & walwal maalinle ah waxayna daba galaan nolosha runta ah. Iyada oo lebbis quruxsan oo raaxo leh, jaakad isboorti oo fudud & mid caadi ah, waxaan ka gaabin karnaa tallaabooyinkeenna nolosheena soonka iyo kacsan ee leh aamusnaanta aamusnaanta. Ciyaartan ...Akhri wax dheeraad ah »